Korintofo II 8 NA-TWI - Ayamye - Anuanom, yɛpɛ sɛ muhu nea - Bible Gateway
Korintofo II 7Korintofo II 9
Korintofo II 8 Nkwa Asem (NA-TWI)
8 Anuanom, yɛpɛ sɛ muhu nea Onyankopɔn adom ayɛ wɔ Makedonia asɔre ahorow mu. 2 Wɔnam sɔhwɛ ahorow a ɛtoo wɔn a wodii saa sɔhwɛ no so no asɔ wɔn ahwɛ pa ara. Nanso na wɔn ani gye wɔn ho tumi fi wɔn hia mu yɛ adɔe ma ɛboro so. 3 Midi ho adanse sɛ wɔmaa nea wobetumi ma ɛboroo so mpo. Wɔn ara fi wɔn pɛ mu 4 srɛɛ yɛn sɛ yɛmma wɔmfa sika no na wɔnkɔma Kristofo a wɔwɔ Yudea no bi. 5 Nanso wɔyɛ ma ɛboroo so. Nea edi kan no, wɔde wɔn ho maa Awurade. Afei, wofi Onyankopɔn pɛ mu de wɔn ho maa yɛn nso. 6 Enti yɛka kyerɛɛ Tito a ofii adwuma yi ase se, ɔntoa so na ɔmmoa mo na moatumi awie saa ɔdɔ adwuma yi. 7 Moyɛ adefo wɔ nea mowɔ nyinaa mu: ɔkasa mu ne nimdeɛ mu, mmoa a ɛyɛ mo pɛ sɛ moboa mu, ne ɔdɔ a mode dɔ yɛn mu. Enti yɛpɛ sɛ mode ahofama som wɔ ɔdɔ mu.